ब्लड प्रेसर लो भयो भने के गर्ने ? ज्यान बचाउने सबै उपायहरु एकै ठाउँमा – Khabar 27 Media
ब्लड प्रेसर लो भयो भने के गर्ने ? ज्यान बचाउने सबै उपायहरु एकै ठाउँमा
June 7, 2021 Shyam LamaLeaveaComment on ब्लड प्रेसर लो भयो भने के गर्ने ? ज्यान बचाउने सबै उपायहरु एकै ठाउँमा
के हो ब्लड प्रेसर ? : सामन्य रक्तचाप १२०/८० हुनुपर्छ । तर, यदि तपाईको ब्लड प्रेसर ९०/६० वा त्यो भन्दा कम छ भने, तपाईलाई लो ब्लड प्रेसरको समस्या छ । प्रेग्नेन्सी- प्रेग्नेन्सीको क्रममा कति महिलाको सर्कुलेटरी सिस्टम तिब्र रुपले बढ्छ, जसले ब्लड प्रेसर लो हुन्छ । तर, प्रग्नेन्सीको बेला यो सामन्य हो । बच्चा जन्मिएपछि रक्तचाप सामन्य अवस्थामा आउँछ । यदि कुनै महिलाको रक्तचाप नियमित न्युन भयो भने चाँहि परीक्षण गराउनु पर्छ ।
मुटुको समस्या- मुटुको भल्भमा समस्या, हृदयघात वा हृदयसम्बन्धी रोगले पनि रक्तचाप कम हुनसक्छ । इन्डोक्राइन समस्या- थाइराइड, रक्तअल्पता, लो ब्लड सुगर र कहिले कहिं मधुमेहले गर्दा पनि रक्तचाप न्युन हुनसक्छ । डिहाइड्रेसन- शरीरमा पानीको मात्रा अपुग हुँदा न्युन रक्तचापको समस्या देखापर्न सक्छ । रक्तश्राव- चोटपटकको कारण रक्तश्राव भएर अचानक शरीरमा रगतको कमी भयो भने पनि रक्तचाप न्युन हुन्छ । पोषणको कमी- शरीरमा भिटामिन बि-१२ र आइरनको कमीले एनीमिया हुन्छ । यसले गर्दा शरीरमा पर्याप्त मात्रामा रेड ब्लड सेल बन्दैन र ब्लड प्रेशर लो हुन्छ । औषधी- उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, पार्किसन्स, डिप्रेसनको औषधी सेवन धेरै लिनाले पनि रक्तचाप न्युन हुनसक्छ । यसका साथै चक्कर आउँदा, डेँगु मलेरिया, कुनै डरलाग्दो दृश्य देख्दा रत्तचाप न्युन हुनसक्छ ।
लक्षण : – थकान लाग्छ – कमजोरी महसुष हुन्छ – चक्कर आउँछ – दृष्टि धमिलो हुन्छ – छालामा पहेंलोपन देखिन्छ – शरीर चिसो हुन्छ – धेरै तिर्खा लाग्छ – छिटो छिटो सास बढ्छ किन खतरनाक छ ? : यदि तपाईको न्युन रक्तचाप छ भने त्यसको समयमा उपचार गर्नुपर्छ । अन्याथा यसले खतरा रोगलाई निम्त्याउँछ । – यसले तपाईको स्नायु प्रणाली वा मस्तिष्कमा असर गर्न सक्छ । – गर्भावस्थामा रक्तचाप नियन्त्रण गरिएन भने गर्भको बच्चाको मृत्यु हुन सक्छ । – मनोभ्रम, ब्रेन डिसअर्डर, मृगौला रोग आदि लाग्न सक्छ । – चक्कर आएर जहाँपनि ढल्न सक्छ – रक्त संक्रमणको संभावना हुन्छ ।
के गर्ने ? : – अक्सर चिकित्सकले नुन कम खाने सल्लाह दिन्छन् । तर, न्युन रक्तचापमा सोडियमको मात्रा केहि धेरै हुनुपर्छ । – यदि नुन सेवन मन पर्दैन भने सोया सस सेवन गर्न सकिन्छ । – भरपुर पानी पिउनुपर्छ । – जब कसैलाई अचानक रक्तचाप न्युन हुन्छ, प्राथमिक उपचार थालिहाल्नुपर्छ । पींठको बलले बस्न लगाएर खुट्टाको तल सिरानी राख्नुपर्छ । यसले मस्तिष्कमा रक्तप्रवाह बढाइदिन्छ । – मदिराजन्य पदार्थबाट टाढै रहनुपर्छ । – धेरै समयसम्म उभिएर नबसौ । – धेरै लामो समय बसेर अचानक उठ्नु पनि हुँदैन । – कसरत, योगा, स्विमिङ, साइक्लिङ आदिले रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । – खानामा कार्बोहाइड्रेडयुक्त पदार्थ जस्तो कि आलु, चाम, ब्रेड, पास्ताको मात्रा कम गर्ने ।
यसरी सुरक्षित रहने : – धेरै भन्दा धेरै पानी पिउने, यसले डिहाइड्रेसन हुँदैन । – धेरै तातो पानीले नुहाउन हुँदैन, यसले शरीरमा तापमान बढ्छ । – पर्याप्त निन्दा लिनुपर्छ । – नियमित र थोरै समयको अन्तरालमा थोरै थोरै खाना खाने । – यदि डिप्रेसनको औषधी सेवन गरिरहेका छ भने उठ्नसाथ चक्कर आउनसक्छ । यस्तो अवस्थामा तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । – शारीरिक काम गरेर धेरै पसिना आएको छ भने कागती पानी सेवन गर्नुपर्छ । – चिन्ताबाट टाढै रहनुपर्छ ।
घरेलु बिधी : – १०-१५ वटा किसमिसलाई रातभर पानीमा भिजाउने, बिहान एक एक किसमिश चपाएर खाने र पानी पिउने । – ७ वटा बदाम रातभर भिजाउने । त्यसलाई पिसेर दुधसँग सेवन गर्ने । – १० वटा तुलसीको पात पिसेर रस निकाल्ने । त्यसमा १ चिया चम्चा मह मिलाएर बिहान खाली पेटमा पिउने । – हरेक दिन ब्ल्याक टि पिउने यसले रक्तचाप बढाउन सहयोग गर्छ । – नुन र शख्खरको घोलले पनि लाभ गर्छ ।
“के हो अक्सिजन लेवल : घरमै कसरी, बढाउने- कति हुँदा अस्पताल, जाने ? डा. किदवाईको सुझाव”
जीवनभर खुसी रहने १४ तरिका – पढ्नुहोस
July 25, 2021 July 25, 2021 Shyam Lama
सफल बन्नका लागि यी हुन् विश्वका सबैभन्दा धनी बेजोसका ८ सूत्र
January 16, 2021 Shyam Lama